RAHARAHA FAMONOANA AN’I ADRIANA : Karohina hatrany Marovoay ilay lehilahy hita nitondra farany ilay zaza
Hatramin’ny nanoratanay ny lahatsoratra dia tsy marina ny vaovao niely teto Mahajanga fa efa voasambotra ity olon-dratsy namono an’i Adriana kely, ny alakamisy teo ity. 4 août 2020
Tsiahivina moa fa efa nandalo fakàna am-bava sy fanadihadiana ny vadiny ary efa nanomboka ny sabotsy 01 jolay teo nivoahan’ny didy fampisamborana avy amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany teto an-toerana. Efa nanomboka ny fikarohana hatrany Marovoay, izay heverina ho toerana nitsoahan’i Moussa na Papa Jhons, hoy ny fianakaviana. Miantso ny havany na ny mety ho mpampiantrano azy any mba hampilaza ny mpitandro filaminana ny fianakaviana. Lehilahy 42 taona ity voarohirohy namono nahafaty tamin’ny fomba feno habibiana an’ilay zazavavikely tsy manan-tsiny tao amin’ny fokontany Tsararano ambany. Tsy vitan’ny novonoiny fa mbola naleviny anaty fasika ka hita faty tao Ambohimandamina vakim-paritra faharoa, ny alakamisy teo. Nisy nahita ny nakany an’i Adriana ary mbola nifanena tamin’ ny lehilahy lehibe iray hanao jangoany izy avy nandevina ilay zazavavikely.
Fanaovana tsinontsinona ny mahaolona
Ny Polisim-pirenena mpanao famotorana sy ny Zandarimiarim-pirenena misahana ny heloka bevava no niara-nandray an-tanana ny raharaha ary miara-manao ny fikarohana ny nahavanon-doza amin’izao. Efa miparitaka any amin’ny tambazotra sosialy ihany koa ny sarin’ity tsy mataho-tody ity. Mety hampananosarotra ny fitadiavana azy anefa ny fanaovana aron-tava noho ny fiparitahan’ny valanaretina covid-19, saingy ny olon-drehetra dia efa mitady azy sy manara-maso ny mety hahitana azy avokoa. Miantso ireo olona tsara sitra-po mba hampandre haingana azy ireo ny mpitandro filaminana raha sendra mahita ity olon-dratsy ity na mahare ny vaovao mikasika azy.
Mitana ny sain’ny maro eto Mahajanga ity tranga nampalahelo ity ary manameloka an’i Moussa avokoa ny rehetra. Tsy vitsy ihany koa ny mitady ny hamerenana ny fanamelohana ho faty amin’ny tranga tahaka izao. Tsiahivina moa fa efa maromaro ny tranga famonoana zaza tahaka izao teto Mahajanga. Anisan’izany ilay zazalahikely zanak’i Hery Buisson. Ilay zazakely novonoina sy notsofaina teny Antanimasaja ary ity zazavavikely ity. Tsy eken’ny saina maha olombelona ny famonoana zaza tsy manan-tsiny no tsy afaka hamaly akory ny mamono azy na inona na inona antony.